ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ Perfect Man ၌အဘယ်အရာကို Want ပါနဲ့?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 21 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲသူတို့၏အသက်တာတွင်ထိုလူကိုအချို့သောအရည်အသွေးတွေကိုရှိလို. အဆိုပါစာရင်းတွင်တော်တော်လေးကြာမြင့်စွာမဖြစ်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကတစ်ခုတည်းလူကိုလူအပေါင်းတို့သည်အဆိုပါအရည်အသွေးများတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲဖြစ်လာ. ဒါကြောင့်, သင်အောက်မှာဆွေးနွေးအရည်အသွေးများများ၏အများစုကိုရှိပါက, အမျိုးသမီးများ wooing နှင့်သူတို့ပျော်ရွှင်အောင်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုယောက်ျားအဲဒီအရည်အသွေးတွေချို့တဲ့ထက်အများကြီးပိုဖြစ်လိမ့်မည်.
အမျိုးသမီးများကိုယ့်မကောင်းတဲ့အနံ့သောသူလူတို့ကိုမုနျး. ဒါကြောင့်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူထွက်သည့်အခါတစ်ဦး deodorant တရားစွဲမည်ဟုဆိုဘယ်တော့မျှမမေ့ပါ. သင်အသုံးပြုတဲ့ deodorant သင်တို့အပေါ်မှာကောင်းအနံ့သေချာအောင်လုပ်ပါ. မွှေးအကြိုင်သို့မဟုတ် deodorant သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်အပြတ်ပြီးနောက်ဖန်တီးပေးအနံ့၎င်း၏အနံ့နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနံ့တစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်. ဒါကြောင့်, သင်တို့၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးပေါ်ကြီးစွာသောအနံ့တစ်ခု deodorant သို့မဟုတ်အမွှေးနံ့သာကိုသင်ကောင်းအနံ့အောင်မစေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်, တစ်ဦးကြိုးစားခဲ့စမ်းသပ် option ကိုသွား; deodorant ရွေးချယ်မှုရာတွင်ဉာဏ်ပညာကိုမနိုင်ပါစေ.
အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများတစ်သင်းလုံးကကစားသမားတွေရဲ့ဥာဏ်ကောင်းသောရှိခြင်းနှင့်အတူရှိမှသာချစ်. အမျိုးသမီးအများစု, ညံ့ဖျင်းဝတ်ဆင်ယောက်ျားကြီးတွေ turnoffs များမှာ. အမျိုးသမီးများအထင်ကြီးစေရန်တို့သည်အစဉ်ဖက်ရှင်ခေတ​​်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြပြီးဝတ်စားဆင်ယင်လမ်းခရီး၌အပြောင်းအလဲအောင်အပေါ်ကိုစောင့်ရမည်. သို့သော်, ယောက်ျားသည်သာသူ့အပေါ်၌ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းကြောင်းမတ်မတ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်, စမ်းသပ်ဆဲတစ်ခုခုသူ့ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားကိုဖြည့်မထားဘူးမခံဘဲ.
ရိုးရာလွန်း sexy ဖြစ်နိုင်; ဒါကြောင့်, သင်ခေတ​​်မှီသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်မဟုတ်လျှင်, အဟောင်းထဲကအကြိုးစား, ဒါပေမယ့် tee နှင့်ဂျင်းတူမှားပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်မသွားနိုင် (ပညာအဆင်းအရောင်ကိုရွေးပါ, အပြာဂျင်းအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်).
အမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲသူမယောက်ျား၏အသက်တာ၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချင်တယ်; သူမအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်. လည်းမုသာစကားကိုသည်းခံလို့မရဘူး. ထိုသို့, ယောက်ျားသည်အစဉ်အမြဲမိန်းမသည်သူ၏မယားသို့မဟုတ်မိန်းကလေးမိတ်ဆွေတဦးနဲ့အလွန်ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားရမယ်. လူတို့သည်ဥစ္စာရှိသမျှအတွေ့အကြုံများဝေမျှဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့သင့်ပါသို့မဟုတ်အသက်တာ၌ရှိခြင်းနေကြသည်, ကောင်းကျိုးသို့မဟုတ်သူတို့၏ဘဝအသက်တာ၌မိန်းမနှင့်မကောင်းတဲ့.
သို့သော်, ထိုပုံပြင်ထဲမှာလှည့်ကွက်ရှိပါတယ်; သင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေး၌ရှိကြ၏မိန်းမအားပွင့်လင်းဖြစ်သင့်နေစဉ်, သင်ရက်စက်စွာရိုးသားဖို့မတတ်နိုင်. သူမကိုအကောင်းဆုံးကျွန်မကြည့်မမျှော်သောအခါပင်သူမ၏ချီးမွမ်းရန် Learn; သူမကိုရရှိထားသူလျှင်ပင်သူမ၏အဝလွန်ကိုပဌနာဘယ်တော့မှမ 10 ပေါင်; သူမအမှန်တကယ်ပင်လျှင်မကောင်းသောအထမင်းချက်သူမ၏ခေါ်ဆိုခြင်းကိုရှောင်ရှား. ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါနှင့်သင်သေချာများအတွက်ပျော်ရွှင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်.
ကလေးငယ်များကိုချစ်သွားသက်ကြီးရွယ်အိုများကူညီခြင်းမှနေပါပြီဘယ်တော့မှအဘယ်သူသည်သူရဲကဲ့သို့အမျိုးသမီးများ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အသက်တာတွင်ထိုလူကိုစာနာထောက်ထားဖြစ်ချင်တယ်. ကောင်းမွန်သောဥပမာများကိုနှိမ့်ချသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ, သူ့ပတ်လည်ကလူတွေသဘောကျသောသူသည်တစ်စုံတစ်ဦး, အသက်ကြီးသောသူတို့သည်ကသဘောကျသောသူ.
မကြာခဏယောက်ျားပဲသူတို့ခံ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ကြားမှနှင့်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုဖြစ်ခြင်း၏အမှားကျူးလွန်. အမျိုးသမီးများခိုင်နည်းလမ်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့နှင့်စာနာထောက်ထားလျှက်နှင့်အကာအကွယ်ပေးရန်စွမ်းရည်ကိုရှိခြင်း.
သင်သည်ဤအရည်အချင်းများရှိသည် Do? အကယ်. မ, သူတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစား; ဒီအရည်အသွေးတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲစုံလင်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ဆောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကအခုန်ခြေလှမ်းသင်ယူခြင်းထက်မျ​​ားစွာ ပို. လွယ်ကူသည်ကဲ့သို့သင်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှု၌ထားရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
Romance ကို, ခံစားချက်ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့လုပ်ပါအရာတစ်ခုခု?